Tsigiro, kubva kuApple, yava kuwanikwa kuSpain | IPhone nhau
Tsigiro, kubva kuApple, yava kuwanikwa kuSpain
Apple yakaunza zviri pamutemo Tsigiro munaNovember apfuura. Icho chitsva rutsigiro sevhisi yevashandisi kuburikidza nechishandiso cheIOS kuburikidza nekusahadzika kwevashandisi kana zvichemo zvinopindurwa kuburikidza ne iPhone kana iPad. Pakutanga, iyo purogiramu yakangotangwa muNetherlands. Nekudaro, ikozvino nhau ndedzekuti yatovepo kurodha muSpain zvachose mahara. Sezvatakakurukura mwedzi mishoma yapfuura, muApple Tsigiro mushandisi ane zvinongedzo zvinobatsira kune akasiyana rubatsiro zvinyorwa uye magwara. Kuwana masevhisi akadai seAppleCare kunopihwawo.
Iko kunyorera kunowanikwa muSpanish, asi kuziva Apple's technical service kunobatsira kushandisa chikuva nenzira iri nyore. Izvo zvakatungamirwa nekambani naTim Cook yaive yekugadzirisa webhusaiti yayo yekutsigira kuti ifambise kune nhare mbozha. Apple Tsigiro yave kuwanikwa muApp Store mahara zvachose uye muchiSpanish. Apple inoona mukutsanangurwa kweiyo nyowani Tsigiro yekushandisa iyo vashandisi vachakwanisa kutaura ipapo nehunyanzvi nhare, kutaura kana email, kuvabatsira kupindura mibvunzo yavo yese. Uye zvakare, kuburikidza neichi chitsva chishandiso zvakare zvinokwanisika kuronga yekutsigira kufona, nekuti apo vashandisi pavanogona kutaura vakadzikama, kana kutokumbira kugadziridzwa kuApple Chitoro padyo nenzvimbo yedu. Iko kunyorera kunouya kudzikisira kumwe kushomeka kukuru kwaive neApple mukubatsira kwayo basa. Nzira dzakasiyana dzekutsigira idzo dzakapihwa vatengi vayo nekambani haina kusanganisira iyo telematic vhezheni kuburikidza nechikumbiro, asi kubva zvino dambudziko ragadziriswa.
Pamusoro peichi chishandiso chitsva, vashandisi veApple kifaa vachakwanisa kubata kambani zvakananga kubva kune yayo webhusaiti kana kuburikidza neyepamutemo Twitter account yakatsaurirwa kupindura tekinoroji mibvunzo kubva kuvanhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Tsigiro, kubva kuApple, yava kuwanikwa kuSpain
tvOS 10.2 beta 1 ikozvino inowanikwa kune vanogadzira